umatshini wokupheka irayisi eLago eNigeria,Umgaqo wokusebenza kwerayisi
Olu luhlu lomatshini welayisi yerayisi lisetyenziswa ikakhulu ukwahlula amatye kwi-paddy ecocekileyo, ingqolowa. Ifakwe ngemoto ezihamba zimbini ezijikelezayo, ibonisa imveliso ephezulu, Umgangatho omkhulu wokulinganisa kunye nefuthe lokwahlula, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, ingxolo ephantsi, akukho uthuli oluphuphumayo kunye nokusebenza okuzinzileyo.
Umatshini osebenzayo weerayisi kwisimo esisebenzayo ukwahlula iinkozo kunye negravel ngokunyakaza okunyakazayo, Ukulungelelaniswa kokuhamba komoya kunye nokulungelelanisa ukutyekela komphezulu wekhusi. Umzimba ngumzimba granular oqulunqwe ngamasuntswana enobukhulu obahlukeneyo kunye nobunzima obuthile. Xa uphantsi kwentshukumo okanye ukuhamba kwimeko ethile, iintlobo ezahlukeneyo zamasuntswana zihlelwa ngokwamanqanaba ahlukeneyo ngokuxhomekeke kubungakanani bazo obuthile, ubungakanani bengqolowa, ubume, kunye nomphezulu womhlaba.
Xa umatshini we-risoner yerayisi usebenza, izinto eziqhubeka ngokungena zingena embindini wesisitye selitye ukusuka kwindawo yokutyela. Ngenxa yokunyibilika komphezulu wekhusi kunye nefuthe lokuhamba kwegesi ngomaleko wezinto, I-porility phakathi kwamasuntswana ayanda, Izixhobo zikwimo enamanzi, kwaye ukuhlelwa okuzenzekelayo kuyakhuthazwa. Igravel enobunzima obuphantsi kuneli litye elikhulu linxibelelana nomphezulu wekhusi. Ukutsiba phezulu, phantsi kwempembelelo yomxhuzulane, amandla angaphakathi kunye nokondla okuqhubekayo, ityibilika iphuma ngaphandle kwengqolowa; Ngelixa ilitye elinomda omkhulu lislayita kumphezulu wesibane phantsi kwesenzo samandla angaphakathi kunye nenciphiso yenkqubo yongcakazo yomphezulu wekhusi.. Isithili saseJuishi safudukela kwindawo ekhethiweyo. Igumbi elikhethiweyo kwindawo ekhethiweyo laziswa yintshatsheli kumjelo womoya. Yayiqhutyelelwa ngasemva ecaleni kwe-arc eyenziwe yaya ngaphambili komphezulu, Ukubetha inani elincinci leenkozo eziqukethwe kwilitye zibuyiswa kwindawo etyumkileyo, ukunqanda ukukhutshwa ngamatye.
Nxibelelana nathi Malunga nomatshini weerayisi
Khetha ulwimi lwakho EnglishAfrikaansالعربيةမြန်မာစာNederlandsWikang FilipinoFrançaisDeutschहिन्दी; हिंदीBahasa IndonesiaItaliano日本語한국어PortuguêsEspañolKiswahiliภาษาไทยTürkçeTiếng ViệtisiXhosaisiZulu